Nakuba kunezizathu ezanele zokukhetha i-WordPress ukubhala incwadi, sizogxila kwisakhi esisodwa esisenza i-CMS ekhethekile – inqwaba ye-eklentisi eyenza ukwakha isayithi kube lula futhi kumnandi.
4 I-7. I-WP Süper Önbellek
8 I-15. I-Clef İki Faktörlü Ukuqinisekisa
10 I-19. I-Meta Kaydırıcı
Ifomu lokuxhumana 7 iyi-eklenti elula futhi eguquguqukayo evumela ukuthi udale amafomu okuxhumana okusheshayo usebenzisa i-HTML. Ungabeka lezi fomu kunoma iliphi ikhasi nge-shortcode.
Vakashela ku-intanethi: I-Google XML Site Haritaları
I-Google XML Site Haritaları i-plugin ebalulekile ye-SEO esisiza abakwa-web tarayıcıları ukuthi baqonde isayithi lakho bese babhala amakhasi awo.
I-7. I-WP Süper Önbellek
I-Yoast SEO iyi-eklenti ethandwayo engakusiza nge-on-sayfa nokwenza kahle. Kuyasiza ukuthola izinkinga, ukhiqize ama-sitemaps, futhi unikeze izincomo ezingathuthukisa izikhundla zesayithi lakho.
U-Akismet ungenye i-eklentisi engasiza ekuvimbeleni ugaxekile. Ihlola ngokuzenzekelayo futhi ihlunga yonke imibono e-gölgeli yokubuyekezwa komhlahlandlela.
Vakashela ku-intanethi: I-SiteOrigin Sayfa Oluşturucu
Amazwi we-plugin ye-SiteOrigin Sayfa Oluşturucu ngokufaka isikhombimsebenzisi sokudonsa nokudonsa kumhleli wekhasi. Ungakha ikhasi elisha kusuka emhlabathini phezulu noma sebenzisa isakhiwo esakhiwe ngaphambilini ukugcina isikhathi.
I-15. I-Clef İki Faktörlü Ukuqinisekisa
Vakashela ku-intanethi: I-Black Studio TinyMCE Widget’ı
Nge-Black Studio TinyMCE Widget, ungakwazi kalula ukufaka umbhalo ocebile, okunamathiselwe kumidiya, nezinye izakhi zokuqukethwe kuma-kenar çubukları.
I-19. I-Meta Kaydırıcı
Amafomu we-Ninja ufaka umhleli wefomu lokudonsa uphonsa ekufakweni kwakho kwe-WordPress. I-eklentisi yomsebenzisi dostu engakwazi ukukuqondisa zonke izinyathelo zendlela.
Vakashela ku-intanethi: Izinketho ze-Ekmek kırıntısı
Nge-Breadcrumb NavXT, unganikeza izivakashi zakho izixhumanisi zokuhamba ukuze ukuthi ziphi zizisize. Uma ifakiwe, udinga ukunamathisela ikhodi elula ‘div’ lapho ufuna khona "umzila" kırıntı ukuvela.
Vakashela ku-intanethi: I-WP Posta SMTP
I-WP Posta SMTP ikuvumela ukuba usebenzise i-SMTP futhi ufinyelele okukhethwa kukho okuthuthukisiwe emsebenzini we-imeyili wesayithi lakho. Ukuze usebenzise i-eklentisi, iya kuzilungiselelo> I-imeyili kusuka kudeshibhodi yakho. Ungathumela futhi i-imeyili yokuhlola ukuze uhlole uma ukucushwa kwakho kusebenza.
Le plugin elula ikuvumela ukuthi udale futhi usebenzise amawijethi wesithombe kusayithi lakho. Lezbiyenler amawijethi ngokuzenzekelayo zivumelanisa futhi zishintshe tıbbi namadivayisi eselula. Ungakwazi futhi ukwengeza isihloko, incazelo, kanye nesixhumanisi ukuze ubenze xaxa.
Takvim Takvimi ivumela ukuthi udale amakhasi asebenzisana nemicimbi efana nokukhushulwa, amaqembu, nama seminer. Vele usebenzise isikhombikubona esibonakalayo ukuze ugcwalise imininingwane bese ushicilela umcimbi wakho.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress inezindima eziyisihlanu zomsebenzisi – umqondisi, umhleli, umbhali, umnikelo, nombhalisi. Umhleli we-User Rolü ikuvumela ukuba ushintshe izimvume zohlu lomsebenzisi ngamunye. Ukhululekile futhi ukudala izindima ezintsha ngezimvume eziyingqayizivele.
Nge-eklentisi ye-WordPress, uhlobo lwamawebhusayithi ongawadala üzerinde zikhona amathuba angapheli. Qinisekisa ukuthi uhlela phambili ukuze izingxenye zesayithi lakho zifake isipiliyoni esisodwa, esihlangene. Ungabhekisela kuwo lokhu okuthunyelwe kwamapulagi angaphezulu angasiza ukwandisa ukuguqulwa.